के तपाईलाई थाहा छ मधुमेहका बिरामीले के कति खाने ? - राेल्पा न्युज
के तपाईलाई थाहा छ मधुमेहका बिरामीले के कति खाने ?
राेल्पा न्युज calendar_today ३ माघ २०७६, 4:20 am
कसैलाई मधुमेह लाग्यो कि यो खान हुन्न, त्यो खान हुन्न भन्ने गरेको सुनिन्छ। कतिपयले कुनै खाने कुरा रोग बढ्ने डरले छुँदा पनि छुँदेनन्। कतिले चाहिँ घुमीफिरी कार्बाेहाइड्रेट नै बढी खाइरहेका हुन्छन्। कतिले उसिना चामलको भात टन्न खाने गरेको पनि पाइन्छ।
तर त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी पोषणविद् नानीशोभा शाक्यका अनुसार मधुमेहका रोगीले के खाने भन्दा पनि कति र कसरी खाने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।
मधुमेहका रोगीले सबै खानेकुरा मिलाएर खानु पर्छ। तर बढी चिल्लो र गुलियो खानेकुराहरू भने खानु हुँदैन।
कडा मधुमेहका बिरामी जसको शरीरमा कहिलेकाहीं ग्लुकोजको मात्रा धेरै घटेर पसिना आउने, रिंगटा लाग्नेजस्ता समस्या आउँछन्। त्यस्तो बेलामा यस्ता खानेकुरा खानुपर्छः
– मधुमेहका भात कम खाने बहानामा अन्य अन्न तथा कार्बाेहाइड्रेट खाने चलन पनि छ। यसो गर्नु गलत हो। बरू यसको साटो अन्नका सबै परिकार मात्रा मिलाएर खाँदा असर पर्दैन। आफ्नो कामको प्रकृति, शारीरिक संरचना, उमेर र लिङ्गअनुसार यी सबै खालका खानेकुराको मात्रा मिलाएर खान सकिन्छ।
– यी खाने कुरा खाँदा अन्नको सबै समूह समावेश गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी प्रोटिनयुक्त खानेकुराको मात्रा, नजम्ने प्रकारका चिल्लो पदार्थबाट बनेका खानाहरू, खनिज तथा भिटामिनयुक्त खानाहरू खानु पर्छ। तर धेरै चिल्लो र गुलियो खानेकु्रा भने खानु हुँदैन। आलु ,पिँडालु ,सखरखण्डजस्ता खानेकुरा खानु परेमा भात, रोटी खानु हुँदैन।
– यसमा पनि शारीरिक श्रम गर्नेहरूले अन्य मधुमेहका रोगीको तुलनामा केही मात्रा थप गरी खान सक्छन्। श्रम नगर्नेहरूले भने सबै खानाहरूको कम मात्रा मिलाएर खान सकिन्छ। यसो गर्दा शरीरमा चिनीको मात्रा बढ्न पाउँदैन।
– वृद्ध उमेर भएका मधुमेहका रोगीले पनि सबै थरिका खाना कम मात्रामा खान सक्छन्।
– मधुमेह बिरामीको तौल बढी छ भने तौल घटाउन सकेसम्म कम खाने र नियमित कम्तिमा आधादेखि एक घण्टा हिँड्नु पर्छ। अन्य किसिमका मधुमेहका बिरामीले पनि अनिवार्य रूपमा व्यायम र हिंडडुल गर्नु आवश्यक छ।
सुर्खेतमा क्वारेन्टाइनमै सुत्केरी
गर्मीका लागि हेयर कलरिङ टिप्स
याेग तथा प्राणायाम एवं ध्यान, धारणा, समाधिः विस्तृत जानकारी
लकडाउनको सदुपयोग : यसरी घरमै रहन सकिन्छ स्वस्थ र खुसी
आम मानिसले योगलाई कसरी बुझ्ने ?